#Qarax miino oo ay qaar ku dhinten, kuna dhaawacmeen 5 caruur ah Gobalka Homs ee dalka Syria - Get Latest News From Horn of Africa
#Qarax miino oo ay qaar ku dhinten, kuna dhaawacmeen 5 caruur ah Gobalka Homs ee dalka Syria
By REUTERS On Aug 15, 2019 Last updated Aug 15, 2019
Ugu yaraan laba caruur ah ayaa naftooda ku waayey seddex kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii miino ay kaga tageen halkaa argagixisadu ay kula qaraxdey caruurtaas gobolka bartamaha Suuriya ee Homs.
Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Syria SANA ayaa soo werisay in qaraxu uu ka dhacay deegaanka Housh Hajou ee waqooyiga gobolkaas fiidnimadii Arbacada, isagoo intaa ku daray in qaar ka mid ah carruurta dhaawacantay ay xaaladdoodu aad u liidato.
Waxaa kaloo la sheegay in dadka dhaawacmay loola cararay cisbitaalka al-Bassel ee Karm al-Louz si ay u helaan daryeel caafimaad.
Sida uu sheegayo dhaqtarka Naser Edris, agaasimaha cisbitaalka, labada caruur ah ayaa naftooda ku waayey dhaawacyo aad u daran oo ka soo gaarey qarax, kaasoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen sadexda kale.
Warbixintu waxay intaa ku dartay in argagixisada ajanibiyiinta taageeradda ka helaye in ka hor guuldaradooda kasoo gartey gobolka, in ay miinooyin iyo aalado qaraxyo ba ku aaseen dhulka miyiga ah iyo aagagga ku xeeran xaafadaha la deggan yahay si ay u bartilmaameedsadaan dadka rayidka ah.
Toddobaadkii la soo dhaafay, ugu yaraan shan qof ayaa la diley ka dib markii kooxda argagixisada ee Takfiriyiinta Daesh ay qarxiyeen gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay xarun isgaarsiineed oo ku taal magaalada Kurdiyiinta ay haystaan ee al-Qahtaniya ee waqooyiga bari ee Hasakah.
Siiriya, oo ay dib uu qabsadeen maleeshiyaad ilaa iyo sanadkii 2011 oo ay ku dileen boqolaal kun, Haddaba dawladda waxaay ku guuleysteen inay dib ula wareegaan dhul badan oo Daesh iyo kooxaha kale ee argagixisada ah ay haysteen arkii hore. Dagaalkii bahalnimada ahaa wuxuu kaloo barakiciyay malaayiin dad ah gudaha dalkaas.